हुवावेले सार्वजनिक गर्यो फोल्ड गर्न मिल्ने तेस्रो स्मार्ट फोन, कति पर्छ मूल्य ? « MNTVONLINE.COM
हुवावेले सार्वजनिक गर्यो फोल्ड गर्न मिल्ने तेस्रो स्मार्ट फोन, कति पर्छ मूल्य ?
एजेन्सी । अमेरिकी प्रतिबन्धसँग जुझिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेले फोल्ड गर्न मिल्ने मोबाइल फोन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । आठ इन्च (२० सेमी) फराकिलो स्क्रिन भएको यो फोन हाल चिनियाँ बजारमा मात्र बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
मेट एक्स२ सिरिजको मोबाइल फोन सार्वजनिक गरेको हुवावे टेक्नोलोजिज हाल अमेरिकी प्रोसेसर चिप्स र गूगल सेवाबाट बन्चित छ । गत वर्ष, हुवावे विश्व मोबाइल बजारमा बिक्रीका दृष्टिबाट पहिलो स्थानबाट छैटौं स्थानमा झरेको थियो ।
हुवावेका उपभोक्ता इकाईका अध्यक्ष रिचार्ड यूले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पछिल्लो सिरिजको मोबाइल फोनले प्रयोगकर्तालाई विशेष अनुभूति दिलाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकी सेना रहेको इराकी ब्यारेकमा १० वटा रकेट प्रहार
इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विष्फोट
बार्सिलोनाका पूर्व अध्यक्ष रिहा